ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ Bed Room ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရပြီလား? - Phoenix Emperor
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ Bed Room ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရပြီလား?
Home / Blog / ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ Bed Room ကြောင့်စိတ်ညစ်နေရပြီလား?
09ဇွန် 2019 by admin
လူတစ်ယောက် အရမ်းပင်ပန်း နွမ်းနယ်နေပြီဆိုရင် အိပ်ယာပေါ်မှာ လှဲလိုက်ရရင် အရမ်းကိုသက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။ လူတစ္ေယာက္ အရမ္းပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ေနျပီဆိုရင္ အိပ္ယာေပၚမွာ လွဲလိုက္ရရင္ အရမ္းကိုသက္ေတာင့္ သက္သာ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သင့္အိပ္ခန္းက ေဟာင္းႏြမ္းေနျပီ ရႈပ္ပြေနရင္ သင့္ရဲ႕ ပင္ပန္းတဲ့ စိတ္ကိုပိုဆိုးေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိအိပ္ခန္းကိုအသစ္စက္စက္အခန္းမွာေျပာင္းေနလိုက္ရသလို ခံစားမႈကိုရရွိေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈေလးေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုပါတယ္။ဒါကြောင့် မိမိအိပ်ခန်းကိုအသစ်စက်စက်အခန်းမှာပြောင်းနေလိုက်ရသလို ခံစားမှုကိုရရှိစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့အိပ်ယာခင်းတွေဟာဟောင်းနွမ်းကြာမြင့်နေပြီဆို ကျန်းမာရေးနဲ့လဲမသင့်တော်တဲ့အတွက် အသစ်လဲလှယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။သာမာန်သုံးနေကျအရောင်မျိုးမဟုတ်ပဲ Bright ဖြစ်တဲ့အရောင်လေးတွေ မျက်စိအေးစေမဲ့အိပ်ယာခင်းမျိုးနဲ့လဲလှယ်လိုက်ပါ။
သင့်ကုတင်ရဲ့ နံရံအလည်တည့်တည့်မှာ သင်နှစ်သက်တဲ့ ပန်းချီကား ဒါမှမဟုတ် နံရံကပ်အလှဆင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကိုထားလိုက်ပါ။
အိပ်ခန်းရဲ့ ဒေါင့်တစ်နေရာရာမှာစာဖတ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်မဲ့အသေးစားနေရာလေး တစ်ခုပြင်ဆင်လိုက်ပါ။သင့်အခန်းကိုအသစ်ကဲ့သို့ခံစားရစေမဲ့ အချက်တစ်ခုပါပဲ။
ပြတင်းတံခါးမှာတပ်ဆင်တဲ့လိုက်ကာတွေကိုလဲ အသစ်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလျင်လဲလှယ်တပ်ဆင်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် လျော်ဖွတ်ပြီးနေရာအပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်တပ်ဆင်ပါ။
ပန်းအိုးလှလှလေးတွေထားရှိတာ နံရံမှာမှန်တပ်ဆင်တာ နံရံမှာ ပို့စ်ကတ်တွေ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ချိတ်ပေးတာမျိုးကလည်း သင့်အခန်းကိုအသစ်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခန်းကို အရမ်းရှုပ်ထွေးအောင်မပြင်ဆင်ဖို့လဲလိုပါတယ်။
အခန်းကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်အောင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခါဂရုစိုက်ပါ။နံရံကပ်စာအုပ်စင်အသေးစားလေးတွေထားရှိပါ။ မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပါ။တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးမလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာ အခန်းကိုရှုပ်ထွေးညစ်နွမ်းစေပါတယ်။
Copyright © 2021 All rights reserved by phoenix-emperor.com